ATN: ဆာရီယဲလ် ကဗျာတပုဒ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိကလေးက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် လှလိုက် သပ်ရပ်လိုက်တာ။ အကိုမို့ လုပ်တတ်တယ်။
မွေးနေ့မှာ လှောင်အိမ်ထဲက လွတ်မြောက်တဲ့ ငှက်ကလေးလို စိတ်ရဲ့ စေလိုရာမှန်သမျှ ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်စွာ သွားနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ထပ်ပြောချင်တာက ချိုသင်း အမအကြီးဆုံး မစံနဲ့ အကိုနဲ့ လရော၊ နှစ်ရော ၊ နေ့ရော အကုန်လုံး တူတယ်။ အကိုကြီးတယောက် ရတာပေါ့။ March born တွေက သိပ်သဘောကောင်းတာ တဲ့။ ကြားဖူးတာပဲလေ :)
ဟား ... စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေက သိပ်ကောင်းတော့ အရမ်းသဘောကျသွားပြီ .....
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အကိုရေ ....
ကိုယ့်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း က ကိုယ့်ရဲ့ သမိုင်းပဲပေါ့နော်။ အကိုရေးထားတဲ့ ခုနှစ် တစ်ခုချင်းစီ သေသေချာချာ ဖတ်ရင်း ကိုယ် လက်လှမ်းမှီသလောက်၊ ကိုယ် ကြားဖူးထားသလောက်တွေနဲ့ မြင်ကြည့်လို့ ရသလောက် မြင်ယောင်ကြည့် သွားပါတယ်။
ပြီးတော့ အကို့ရဲ့ ၄၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် အကြို ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်...
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ် မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို မိသားစုနဲ့ အတူတူ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
ရဲဘော်ကြီးရေ လွှတ်ကောင်းဗျာ ဖန်တီးမှုကောင်းလွန်းလို့ ဒီလိုပဲပြောခြင်တော့တယ်ဗျာ...။
ခြင်္သေ့လေးသုံးကောင်၊သို့မဟုတ် ငှက်ကလေးသုံးကောင်နဲ့အတူ...၄၅ နှစ်ရဲ့ သုံးခါပြန်မြောက်လောက်ထိ ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ပါစေလို့...
အကိုရေ ဆာရီယဲလ် ကဗျာတပုဒ်ရဲ့လှပလွန်းတဲ့ တင်ဆက်မှုကို အံ့သြတကြီး ဖတ်သွားပါတယ်။
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်သည်အထိ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ :) :)
ကဗျာတွေ စာတွေလဲ အများကြီး ဆက်လက်ရေးဖွဲ့နိုင်ပါစေခင်ဗျာ
ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဆွဲဖွင့် ဖတ်ယူရတဲ့ကဗျာလေး...
အစ်ကို မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
နောက်ထပ် အမောတွေ ကင်းပါစေ..
အစ်ကိုက ညီမရဲ့ မမကြီးနဲ့ နှစ်တူပြီး၊ မမလေးနဲ့ လ၊ရက်တူတယ်..။
မမကြီးက သဘောကောင်းပြီး.. မမလေးက စွာတယ်...။
အစ်ကိုအေကေကရော.. အဲလေ.. အစ်ကိုအောင်သာငယ်ကရော.....
သိပ်လှပတဲ့ အနုပညာနဲ့ တင်ဆက်မှုပါပဲ အကိုရေ ပညာယူ ရင်း ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး ခဲ့ပါတယ် .. :)
အိမ်မက်ဆန်တဲ့ သရုပ်ဖော်ပန်းချီတွေ အပြည့်နဲ့ အိမ်မက်ဆန်ဆန် ဘ၀ ဖြတ်သန်းမူတွေ ကို ခံစားရင်း
အိမ်မက်အကြီးကြီး တခု ရဲ့ မွေးနေ့ မှာ- ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်က တကယ့်အနုပညာရှင်ပါပဲ။ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိပါ။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာလို့ သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ...
အမချိုသင်းပြောတာမှန်တယ်ဆို မုန့်ကျွေးပေတော့ :P
Bravo! အစ်ကိုရေ ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရမှာ တောင်အားနာတယ်။ ရေးထားတဲ့ကဗျာ၊ ပန်းချီပုံတွေနဲ့ ခေတ်သမိုင်းကိုမြင်ယောင်ပြီး အစ်ကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘ၀အမောတွေကို ဝေမျှခံစား သွားပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အမိမြေကို မိသားစုနဲ့အတူပြန်နိုင်ဖို့ အစ်ကိုနဲ့အတူဆုတောင်းပေးနေမယ်။
၄၅နှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းတာရှည် မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်။
အမှတ်တရ မှတ်တမ်းလေးလုပ်ထား သင့်တာသိလား...။
စိတ်တွေသွားရာကို ကိုယ်လည်းလွယ်လင့်တကူလိုက်ပါနိုင်တဲ့ကိုယ် ဖြစ်ပါစေ..။
လေးစားတယ်ဗျာ။ ကိုအောင်သာငယ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဆင့်အတန်းကို မိုးမခမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အခု အနုပညာအဆင့်အတန်းကို ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ သိပ်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်စရာ မကောင်းနိုင်မှန်းသိပေမဲ့ လက်ကျန်ဘ၀ကို ၀ါသနာပါရာ အလုပ်တွေ လုပ်ရင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ကျနော် အလေးအနက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မွေးနေ့မှသည် သက်ဆုံးတိုင် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
ထင်တော့ထင်သားဘဲ အီမေး ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အဓိပါယ်ဖော်နေတာ ကြာပြီ။
Happy Birthday ပါ အကို အောင်သာငယ်၊ ပျော်ရွှင်စ၇ာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်
Happy Birthday ပါ အကိုကြီးရေ၊ အသက် ၄၅ မှ
အသက် ရာကျော်၊ ထောင်ကျော် ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပါတယ် အကို။
Happy birthday Ko ATN!
ကျွန်တော်ရောက်တယ်ဗျာ...၄၅နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပို့စ်မှာ .. ၂၅ယောက်မြောက် ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ် .. ....(((((((((လှလိုက်တာ)))))))))))
နောက်ထပ် ၂၀ယောက်ဆက်ရေးပါလိမ့်မယ် .. . ...
surrealisms ပန်းချီတွေလည်း ကြိုက်တယ်ဗျာ..... ပြောစရာမရှိအောင်လှတယ်.....
ကဗျာဆန်လှတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို အခေါက်ခေါက်ပြန်ဖတ်နေမိတယ်....
မွေးနေ့မှာ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့..
အန်ကယ့် မွေးနေ့က ဒီနေ့မှမို့ လာပွက်တာ ၄၅ လို့မထင်ရအောင် အတွေးကော စိတ်ပါ အမြဲလန်းဆန်းနေတတ်တဲ့ ကျနော့်အန်ကယ်သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး ပျော်စရာမိသားစုလေးနဲ့ အမြဲရှိနေနိုင်ပါစေလို့ ။
ဒီဒဏ်ရာက မပျောက်နိုင်ပေမယ့် အန်ကယ်ဆေးရှာတွေ့နိုင်ပါစေဗျာ ။
အလင်းတွေထဲ ရဲရဲကြီး ပြေးဝင်..
အသွင် အသစ် စာမျက်နှာတွေဖွင့်ဘို့ အတွက်...
ပင်လယ်ပြာပြာ ကို ချစ်တယ်
နီရူဒါရဲ့ ကဗျာတွေကို ချစ်တယ်
နှလုံးသား တစုံ ရှိတယ်..
နှလုံးသား တစုံ ရှိတယ်
ဂီတ သံစဉ်တွေဖွဲ့ သီနေတဲ့
မွေးနေ့ပေါင်းများ စွာ ကို
ဆုမွန်ချွေ တောင်း လိုက်ပါရဲ့...
နှစ်ပေါင်း ရာချီ တဲ့ တိုင်......။
၁၇.၃.၂၀၀၉ မှာ ကျရောက်တဲ့ အကို အောင်သာငယ် ရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှ သည် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို အကို ချစ်သော ငှက်ကလေးများ၊ အကိုချစ်သော နှင်း နဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေ..။ အကိုချစ်သော မိသားစု နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေ..။
ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ..
နွေးထွေးပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေး အမြန်ဆုံဆည်း နိုင်စေဖို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
Hi my senior CO ကြီး...
အင်း.. မွေးနေ့ ရောက်တိုင်း သတိယရမယ့်သူ တယောက် တိုးရော့မယ်။ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျား ။
ငယ်ငယ်က အိမ်ရှေ့ ပုဂ္ဂလိကသားဖွါးခန်းက ကရင်မကြီးသမီးလေးငယ်ငယ် ချစ်စဖွယ်လေးနဲ့ မွေးနေ့ တူတာ သတိယမိတယ်။ အခုတော့ ကလေးမလေး ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ရောက်နေရှာပြီ မသိနိုင်တော့ပြီ.. ကံမကုန်ရင်တော့ ပြန်ဆုံတွေ့ ရ နိုင်ဖွယ်ရှိမယ် ထင်ရတာပဲလေ။
စီနီယာကြီးကလည်းဗျာ..။ ဘယ့်နှယ် မွေးနေ့ မှာ ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘ၀ကို ခြင်္သေ့လည်ပြန် ပြန်ကြည့်ပြီး ကာရန် ပြန်ညှိချင်နေရတာတုန်း။ အဲဒါတွေသည် အလွန် စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ လူသားကောင်း တယောက်ရဲ့အညတရသမိုင်းကာလများ မဟုတ်လေသလော ။ ငါတို့ခြင်္သေ့များဖြစ်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်လေသလော ။ ယုံကြည်ချက်အတိုင်း ဖြတ်ခဲ့ကြသည် ဖြတ်နေကြဆဲ မဟုတ်လေသလော အကိုတော်....
စီနီယာကြီးသည် အရွယ်လွန်ပြီ လုံးဝမဟုတ်ချေသေး။ လူငယ်မောင်အိုဗားမားထက်ပင် အသင်သုံးနှစ် ငယ်ချေသေးသည်လေ။ လူ့ ဘ၀၏ စိတ်အား ရုပ်အား အကောင်းဆုံး အတက်ကြွဆုံးအရွယ် ရောက်နေပြီ။ မကြေကွဲလေနှင့်ဦး။ အိမ်အလွမ်းမဝေလေနှင့်ဦး။
ငါတို့ တူရာစုပြီး တက်ကုန်ရွက်ကုန် လှော်ခတ်ရဦးမည်။ ငါတို့ ရွက်လွှင့်ရဦးမည်။ ဒီမိုးသက်မုန်တိုင်းသည် ငါတို့ အတွက် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးသည်။ ဒီလိုပွဲမျိုးနွဲပြီး ငရဲရောက်ရမည်ဆိုလည်း ငါတို့ ပျော်ပျော်ကြီးသွားမည်။
လိုက်မယ်မဟုတ်လား အိုးမိုင်စီနီယာ စီအိုကြီး....
ညီမချိုသင်း - ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။ မတ်လဖွားတွေက သဘောကောင်းပါတယ်။ အပူဒဏ်ကိုလည်း ခံရတယ်...း(
မနော်၊ ညီမမေ၊ တောရိုင်းနှင်းဆီ၊ ညီမ သက်ဝေ၊ ကိုဂင်၊ ညီမ မကြေးမုံ၊ ညီငယ် ညိမ်းညို၊ ညီ လင်းဒီပ၊ ညီမ ဆင်ဒဏ်လား၊ ညီ မိုးသောက်ယံ၊ ညီမ ကေ၊ ကိုပီတိ၊ ညီမမေ့သမီး၊ ညီမ အိန္ဒြာ၊ ညီ မျိုးဝင်းဇော်၊ ညီ ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ မခင်ဦးမေ၊ ညီ အိုင်လွယ်ပန်၊ ညီမ ကောင်းကင်ပြာ၊ ညီ ကိုအောင်၊ ညီမမီယာ၊ ကိုအမည်မဲ့၊ ကိုရင်နဲ့ မခင်လေး၊ တူမောင်မျိုး၊ ညီမ သီရိ၊ ကိုဝင်းဇော် - ညီတွေ ညီမတွေအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ဆုတောင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ညီတော် ဂျူနီယာ - ညီတော် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ အတူသွားကြတာပေါ့ညီရာ.. ဆုတောင်း အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
အံ့သြလောက်စရာ တင်ဆက်မှု ပါ ။ လေးစားပါတယ် ကိုအောင်သာငယ် ။
ဘာမှကို ပြောစရာမလိုအောင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့
ဘဝဒိုင်ယာရီ ကဗျာလေးကို လေးစားစွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။
မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာလေး ကနေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် အကို..
နောက် ၄ ရက်ဆို မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်တော့မယ်ဗျာ ခင်ဗျား Blog ကိုတော့သတိရနေမှာပါ (အထူးသဖြင့် ကဗျာ နဲ့ သီချင်းကဏ္ဍ) ဟိုမှာတော့အင်တာနက်သုံးရတာ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ
စကားမစပ် ကျွန်တော်လည်း 64 born ပဲဗျ ကျွန်တော် က မေလ။
ခုမှ ဖတ်ဖူးတယ်။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ တင်ဆက်မှုပါပဲ။ စာအုပ်လိုမျိုး ကဗျာ တဖက် စာတဖက် ဆိုရင် ပိုတောင်လှဦးမယ်။
Dali နဲ့ Magritte ကလည်း ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး ပန်းချီဆရာတွေ။